I-Internet EdgeX 1.0 ipulatifomu ye-modular yamadivayisi nezinsizakalo ze-IoT | Kusuka kuLinux
Muva nje Kuthulwe i-EdgeX 1.0,okuyi ipulatifomu evulekile ye-modular yokusebenzisana phakathi kwamadivayisi we-IoT, izinhlelo zokusebenza nezinsizakalo (Inthanethi yezinto).
Isiteji ayihlanganisiwe kumakhompyutha athile nezinhlelo zokusebenza kusuka kumthengisi futhi kuthuthukiswa iqembu elizimele elisebenzayo, ngaphansi kwe-Linux Foundation. Izingxenye zepulatifomu zisatshalaliswa ngaphansi kwelayisense le-Apache 2.0.
1 Mayelana ne-EdgeX
2 Izici 1.0
I-EdgeX ikuvumela ukuthi wakhe amasango ahlangana namadivayisi akhona we-IoT futhi uqoqe idatha kusuka kuma-sensors ahlukahlukene.
Isibonelo, isango linakekela ukuhlelwa kokusebenzisana namadivayisi futhi lenza ukucutshungulwa okuyinhloko, ukuhlanganiswa nokuhlaziywa kolwazi, kusebenza njengesixhumanisi esiphakathi phakathi kwenethiwekhi yamadivayisi we-IoT kanye nendawo yokulawula yendawo noma ingqalasizinda yokuphathwa kwamafu .
Emasangweni, izibambi ezenzelwe ama-microservices nazo zingasetshenziswa. Ukusebenzisana namadivayisi we-IoT kungahlelwa ngenethiwekhi enentambo noma engenantambo kusetshenziswa amanethiwekhi we-TCP / IP kanye nezivumelwano ezithile (hhayi i-IP).
Izindlela ezahlukahlukene zenjongo nazo zingaboshwa ngamaketanga, isibonelo, isango lebanga lokuqala lingaphatha imisebenzi yokuphathwa kohlelo nokuphepha, futhi isango lesibili (inkungu) lingagcina idatha engenayo, lenze ukuhlaziywa futhi linikeze izinsizakalo.
Uhlelo luhlelekile, ngakho-ke ukuhlukaniswa kokusebenza kuma-node ngamanye kwenziwa ngokuya ngomthwalo- Ezimweni ezilula, isango elilodwa lanele, futhi kumanethiwekhi amakhulu we-IoT, iqoqo eligcwele lingasetshenziswa.
Umnyombo we-EdgeX yi-fuse evulekile ye-IoT, esetshenziswa kumasango wedivayisi ye-Dell Edge Gateway IoT.
Ipulatifomu ingafakwa kunoma iyiphi i-hardware, kufaka phakathi amaseva we-x86 ne-ARM CPU asuselwa ngaphansi kwe-Linux, Windows, noma i-MacOS.
I-Version 1.0 ifingqa iminyaka emibili yentuthuko nokuhlolwa futhi kuphawula nokusimama kwawo wonke ama-API amakhulu ukwenza amazinga afanayo ezicelo ezinqenqemeni nokubona ukulungela ukwamukelwa okubanzi.
Phakathi kwezinto ezintsha ezisemqoka yale nguqulo 1.0 amaphuzu alandelayo avelele:
URedis neMongoDB basekela zonke izinsizakalo besebenzisa i-DBMS. Yenza lula ukushintshwa kwesitoreji kusendlalelo sokugcina idatha unomphela
Faka izinsiza zohlelo lokusebenza nama-SDK ukuze uzidale. Izinsizakalo zohlelo lokusebenza zithathwa njengezilawuli zokulungiselela idatha ngaphambi kokuyithumela kuseva yendawo okuyiwa kuyo. Ngokuzayo, izinsizakalo zohlelo lokusebenza zizongena esikhundleni sezinsizakalo zokuthekelisa, futhi manje zibekwe njengethuluzi lokuxazulula imisebenzi emincane yokuthumela ngaphandle esetshenzwe kahle.
Amathuluzi anwetshiwe okuphatha uhlelo, lapho bekwenzeka khona ukulandelela umthwalo owenziwe insiza eku-CPU, isimo sokucutshungulwa kwedatha namanye amamethrikhi
Ukuthumela okokuhlonza ukuhlanganisa okukuvumela ukuthi ulandele idatha yenzwa kuzo zonke izigaba zokuthekelisa ukwenza lula ukulungisa iphutha nokuqapha
Ukusekelwa kokwamukela, ukusebenzisa nokuthumela idatha kanambambili ngefomethi ye-CBOR
Ukufakwa kwamathuluzi wokuhlolwa kweyunithi nezilawuli ezizenzakalelayo zokuphepha
Ukulungiswa kohlaka olusha lokuhlola okubukwayo lokusetshenziswa kwezinsizakusebenza kanye nokuziphatha kohlelo lonke
Ukuvumela ama-SDK amasha nathuthukisiwe ukuthi athuthukise amasevisi ukuze ahlanganyele namadivayisi nezinzwa kuGo and C
Ukuthunyelwa okuthuthukisiwe kokulungiselelwa, ishejuli, amaphrofayli wedivayisi, isango le-API, nokugcinwa okuphephile kwedatha ebucayi.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Aplicaciones » I-Internet EdgeX 1.0 yesikhulumi se-modular samadivayisi nezinsizakalo ze-IoT